Ahoana ny fomba varotra orinasan'ny rongony?
Manazava i Thomas Howard, mpampindram-bola taloha & mpisolovava rongony amin'izao fotoana izao.
Mpisolovava indostrian'ny cannabis
Star iray misandratra sy misondrotra mpahay lalàna, izay 2% amin'ireo mpisolovava ihany no mahazo. Mampihatra amin'ny fanaovana litorjika amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny fifantohana amin'ny orinasa cannabis.
Isan'andro dia mamaly fanontaniana iray malalaka momba ny olana ara-dalàna aho.
Namakivaky an'i Canada ny orinasan'ny rongony rehefa tonga any Etazonia.
Fifampidinihana malalaka miaraka amin'ny mpisolovava amin'ny fambolena ao Illinois
Tsia, tsy mila izany tolotra izany aho.
Tsenan'ny bokotra vidéo
Famintinana horonan-tsarimihetsika Cannabis
1. Mpisolovava rongony any Illinois & mpivarotra entana taloha Tom Howard nanazava fa ireo orinasa rongony dia mampiasa ny Stock Stock Exchange (TSE) hivezivezy manodidina ny Controlled Substances Act (CSA) ary hanao lisitra ny tahiry marijuana azy ireo amin'ny fifanakalozana amerikana toa ny Nasdaq - ohatra Tilray ( Daq: TLRY)
2. Mba hiarovana ny orinasanao rongony dia zahao azafady ny biraonay anio - tel: (309) - 699-4691: Miatrika tsy fahatokisana maro ny orinasa rongony ary iray amin'ny iray amin'izy ireo ny fidirana amin'ny tsena.
3. Ny CSA dia manasarotra - raha tsy azo atao - ny lisitr'ireo orinasam-rongony amerikana amin'ny tsenambola noho ny famonoana ny heloka bevava federaly nateraky ny fanasokajiana marijuana I.
4. Canada dia manana rongony ara-dalàna nanomboka tamin'ny 17 Oktobra 2018, ka noho izany ny orinasa toa an'i Aurora Cannabis dia manao lisitra roa ny tahiry ao amin'ny TSE ary avy eo dia ao anaty lisitra ihany koa ao amin'ny Nasdaq.
5. Ny fitondrana Trump dia tsy nandray fepetra hanakanana ny fifanakalozana tahiry rongony kanadiana toa an'i Tilary, na Aurora, saingy tamin'ny fanilihana an'i Jeff Sesy - tsy afaka maminavina fotsiny isika raha toa ka handray fepetra hampihenana ny sampan-draharaha misahana ny fitsarana na ny Securities and Exchange Commission. ny varotra rongony.
6. Ny TSE dia mbola tsy navelany akory ny lisitry ny orinasa cannabis izay mifehy ny fananan'i Etazonia satria manitsakitsaka ny CSA eo ambanin'ny lalàna amerikana, saingy maro amin'ireo mpandraharaha ao amin'ny habakabaka no mampisaraka ny orin'izy ireo hamela ny lisitra roa.
7. Ny lisitra indroa momba ny rongony dia mamela ireo orinasa miasa any Etazonia sy Kanada hidina eny an-tsena ALOHAN'NY Etazonia dia nandatsaka ny Cannabis tao amin'ny CSA raha toa ka misy volavolan-dalàna toa ilay nampidirin'i Chuck Schumer tao amin'ny Antenimieran-doholona. Koa mitandrema.
8. Raha manana fanontaniana ho an'ny mpisolovava rongony ianao, mifandraisa amin'ny biraonay anio ho fanampiana fanampiana amin'ny famahana azy amin'ny lozisialy lozisialy lozika sarotra.
Rohy fanampiny amin'ny tsenan'ny cannabis
Ity misy lahatsoratra antsipiriany momba ny Forbes izay manazava ny fomba fampiasan'ny orinasa amerikana ny fampidirany Kanadianina mba hitanisa ny tahiry any amin'ireo firenena roa ireo mba hiomanana amin'ny ara-dalàna:
Amin'izany toe-javatra izany, ny orinasa mifandraika amin'ny rongony dia tena tonga any amin'ny main-dàlana, misy ETF lehibe roa, ilay Horizons Marijuana Life Science Index Index (OTC: HMLSF) (TSE: HMMJ) sy ny ETFMG Fijinjana hafa ETF (NYSE: MJ) ny varotra amin'ny fifanakalozana fifanakalozana lehibe, ary ny orinasa toy ny mpamboly ahitra Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) ary biotech miorina amin'ny cannabinoid GW Pharmaceutical PLC- ADR (NASDAQ: GWPH) lisitry ny Nasdaq, ary Fitomboan'ny harona fifanakalozana amin'ny NYSE.
Exceprt avy amin'ny lahatsoratra Bezinga amin'ny an-tsipiriany momba ny dingana handray anjara amin'ny varotra marijuana - ho fampitandremana avy amin'ny broker taloha - Ny tahiry OTC dia tsy mitapoka ary manana olana ara-barotra amin'ny fidirana sy ny fivoahana - efa nampitandremana ianao fa ho bebe kokoa… vakio izany eto daholo:
Manisa ny fanarahan-dalàna